Praiminisitra teo aloha, Beriziky Omer : « Tsy matoky izao fitondrana izao intsony ny vahoaka » | NewsMada
Praiminisitra teo aloha, Beriziky Omer : « Tsy matoky izao fitondrana izao intsony ny vahoaka »
Nitondra ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena tao amin’ny fandaharana “Ambarao” ao amin’ny onjampeo Alliance 92.00 FM, omaly, ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Omer. Nitondrany fanazavana ny olan’ny vahoaka amin’izao fotoana izao sy ny fitantanana ny firenena.
Nohamafisiny fa tsy matoky ny mpitondra ny vahoaka sy ny mpamatsy vola. « Tafahoatra ary tena fadiranovana ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Tsy misy intsony ny fitokisan’ny vahoaka ny mpitondra… Tsy voahaja ny zo fototra maha olona. Zo hiaina sy hanana taratasy maha olom-pirenena”, hoy izy. Nohitsiny tanteraka fa tsy manana vina hatramin’ny voalohany ny mpitondra. Notanisaina fotsiny ireo fampanantenana fa tsy notanterahina. “Tonga tampoka eo amin’ny fitondrana fa tsy niomana handray fitondrana. Firenena vao avy niaina krizy anefa isika… Betsaka loatra ireo lainga tsara lahatra”, hoy ihany ity praiminisitra teo aloha ity.
Tsy matoky ny mpitondra ny mpamatsy vola
Momba ny fivoizan’ny mpitondra ny Drafitrasam-pirenena ho an’ny fampandrosoana (PND), nambarany fa nandaniana fotoana fotsiny izany satria efa nanomana mialoha izany ny Praiminisitra Beriziky, fony izy nitantana. “Efa nisy boky na antontan-kevitra hanaingana ny toekarena nomenay ny filoham-pirenena mba hankatoaviny… Anjarany avy eo ny mampiditra izany ao anatin’ny tetibola, saingy tsy nataony fa izao nanaovana ny PND izao”, hoy ihany izy.
Nitondrany fanazavana koa ny momba ny fahazoantsika ilay volabe 10 miliara dolara tany Paris, niarahana amin’ny mpamatsy vola (CBI). “Fisehosehoana ivelany fotsiny ireny… Vola ho azontsika avy hatrany ve io ? Ahoana ny fepetra samihafa apetraky ny mpamatsy vola ? Anisan’izany ny fanjakana tsara tantana, ny fanajana ny zon’olombelona, ny fanjakana tan-dalàna, ny ady atao amin’ny kolikoly, ny fitoniana sy ny fandriampahalemana… Manana fitokisana antsika ve ireo mpamatsy vola… Takina ny mangarahara momba izany ho fantatry ny vahoaka”, hoy i Beriziky. Nanteriny fa tsy nisy mpampiasa vola vaovao tamin’ny dinika tany Paris. Ireo efa teo ihany no nanome vola… “Midika izany fa tsy manana fahatokisana ny mpitondra ireo mpamatsy vola vaovao”, hoy izy.
Goragora ny fitantanan-draharaham-panjakana
Ankoatra izany, nitondrany ny heviny ity olan’ny vary ity. Nahitsy ny tenany nilaza fa hararaotin’ny mpitondra sy atao fitadiavam-bola ny fahasahiranan’ny vahoaka. “Tsy misy mangarahara hoe iza ny mpanafatra vary ? Ny mpitondra ihany ? Ahoana ny politikan’ny fambolem-bary sy ny varotra ? Tsy mpivarotra vary ny fanjakana, saingy tokony hanara-maso izany”, hoy ihany ny Praiminisitra teo aloha. Notakiny koa ny tokony hanalalahana ny Jirama rehefa tsy voatantana sy voarindra araka ny tokony ho izy manoloana ny kolikoly avo lenta eo anivon’io orinasa io.
Amin’ny ankapobeny, nanteriny fa goragora ny fitantanan-draharaham-panjakana. Manjaka ny honohono sy ny tsaho amin’ny “Raharaha andramena” any Singapour. Manjavozavo ary tokony havoaka ny marina momba ny “Raharahan’Ambohimahamasina”, amin’ny volan’ny kaominina voahodinkodina. Ovana ny fomba fitantanana eto ary tokony hanana fahasahiana amin’izany isika. Ho hentitra amin’ny fanatanterahana ny asa atao, ialohavan’ny fipetrahan’ny fifampitokisana, araka ny nambarany.